Sida loo doorto nooca ugu fiican ee dab-bakhtiiye
Dab-bakhtiiyeha ugu horreeyay waxaa rukhsad ka helay farmashiistaha Ambrose Godfrey sanadkii 1723. Tan iyo markaas, noocyo badan oo dab-bakhtiiyeyaal ah ayaa la ikhtiraacay, la beddelay lana sameeyay. Laakiin hal shay ayaa weli sidii hore ah iyadoo aan loo eegin xilliga - afar walxood waa inay jiraan si dab u jiro. Walxahaas waxaa ka mid ah oksijiin, kuleyl ...
Sidee amaan u yahay xumbada dab-demiska?
Dab-demiyeyaashu waxay isticmaalaan xumbada filim sameynta aqueque (AFFF) si ay uga caawiyaan daminta dabka u adkaysiga la dagaallanka, gaar ahaan dabka ku lug leh batroolka ama dareerayaasha kale ee ololi kara ‚ee loo yaqaan dababka Class B. Si kastaba ha noqotee, xumbooyinka dabka oo dhan looma aqoonsana inay yihiin AFFF. Qaar ka mid ah soosaarayaasha AFFF waxay kakooban yihiin nooc chemi ah ...
Xilligii Bill Gardner uu ku soo biiray adeegga dabka ee markaa miyiga ku yaal Texas, wuxuu yimid isagoo doonaya inuu isbeddel wanaagsan sameeyo. Maanta, isagoo ah hawlgab hawlgab dab damis, dab-demiye tabaruce iyo agaasime sare oo ah alaabooyinka dabka ee ESO, wuxuu u arkaa himilooyinkaas jiilka maanta soo socda iyo kuwa soo socda, sidoo kale. Ku dar ...